Global Voices teny Malagasy » Torkia: Manamarika Ny Isian’ny Fifampiraharahana Eo Amin’ny Mpioko Kiorda Ny Praiminisitra · Global Voices teny Malagasy » Print
Torkia: Manamarika Ny Isian'ny Fifampiraharahana Eo Amin'ny Mpioko Kiorda Ny Praiminisitra
Voadika ny 02 Oktobra 2012 4:21 GMT 1	 · Mpanoratra Ruwayda Mustafah Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Tiorkia, Ady & Fifandirana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Nanamarika ny praiminisitra tiorka, Recep Tayyip Erdoğan, fa hifampiraharaha amin'ny mpioko kiorda taorian'ny volana maro nisiana herisetra mahafaty avy amin'ny mpioko kiorda ho setrin'ny politika tiorka.
Ny fanahiana hiitaran'io herisetra io no nitarika an'i Erdoğan hihevitra ity fifampiresahana ity. Tsy narisika ny hifampiresaka tamin'ny mpioko i Torkia teo aloha, na dia teo aza ny antso avy amin'ny antoko kiorda mpandala ny fandriampahalemana sy ny demokrasia.
Efa niteny tao amin'ny Euronews  manasongadina ny fiovam-piainan'ny vahoaka Kiorda hatramin'ny 2009 i Hugh Pope, talen'ny tetikasa International Crisis Group ao Torkia sy Shipra:
Fihetsiketsehana Kiorda tao Istanbul manohitra ny fifandirana any Diyarbakir. Sarin'i Fulya Atalay, copyright Demotix (15/07/12).
Ratsy tanteraka ny toe-draharaha tamin'ny herintaona fa nihoatra ny 700 ny isan'ny maty nandritra ny ady, ka nahitana miaramila mihoatra ny 200, mpikambana ao amin'ny PKK 400 ary sivily 80 tamin'izany. Izany no tarehimarika ratsy indrindra hatramin'ny nisamborana ny mpitarika ny PKK Abdullah Ocalan ary mieritreritra aho fa kihon-dalana ho an'i Torkia izany satria maro ny zavatra niova tany amin'ny faritra ary mila tondrozotram-politika vaovao i Torkia. Mieritreritra aho fa ny fiitatry ny ady no mametraka ny tokony hiheveran'i Torkia tsara indray ny politikany.
Nanaitra ihany ho an'ny mpandalina fiaraha-monina maro, izay nieritreritra fa nanantena ireo Kiorda hatramin'ny ela ho tafaharo anaty fiaraha-monina ihany ka ho lasa Tiorka ny fitondrana tiorka nifandimby teo.
Notsongaina ho nolazain'i Ismail Beşikçi tao amin'ny tafatafa nifanaovana tamin'i Rudaw  izao manaraka izao:
Tsy manana fijery manokana eo amin'ny famahana ny olana eo amin'ny Kiorda ny fanjakana Tiorka. Izay no antony hanemorany hatrany ny olana fa antenaina ho voavaha ihany izy rehefa ela ny ela. Izany no nisy satria nanantena ny fanjakana Tiorka fa indray andro any ho tafaharo anaty fiaraha-monina ny Kiorda. Maro ny Kiorda no monina any amin'ny faritra andrefan'i Torkia. Nino ny fanjakana fa ho tafaharo ka ho lasa Tiorka any aorian'ny taranaka faharoa (zafikely) na fahatelo (zafiafy) any. Mino aho fa izay no tetiky ny fanjakana
Recently, a nisy tatitra nilaza  vao haingana fa mitady fifampiraharahana ny mpiady anaty akata avy ao amin'ny PKK  (Antokon'ny Mpiasan'i Kiordistana).
Ny governemanta tiorka no tompon'antoka tamin'ny famerana ny fomba fifampiraharahana nandritra ny fifampidinihana tany Oslo, hoy ny menavazana ao amin'ny PKK iray, Zübeyir Aydar, izay nanatrika ny fifampiraharahana nisy teo amin'ny Sampam-pitsikilovana Tiorka (MIT) sy ny PKK, sady nolazainy fa mbola vonona ny hifampidinika indray ny PKK.
Isan-karazany ny valinteny hita ao amin'ny Twitter; manontany  ny fanambarana nataon'i Erdogan taloha momba ny fahombiazan'ny hetsika miaramila hanoherana ny mpioko Kiorda ny sasany.
Nahazo fizaran-kevitra isan-karazany ny Twitter momba ireo mpioko Kiorda ary maro ny Kiorda nisioka amin'ny mety hisian'ny fifampiraharahana. Misy ny tsy resy lahatra, ny hafa indray mampivoitra fa natao hampitonitony ny firehetan'ny herisetra mitranga amin'izao fotoana izay mametraka an'i Torkia ho amin'ny toerana ratsy ny fifampiresahana.
Miteny ohatra i Necirvan , Kiorda monina any Torkia fa fandanian'andro ny fifampiraharahana amin'ny vahoaka Kiorda ka hiteraka fahadisoam-panantenana. Naverin'i Yezdan  izany fomba fijery izany izay nilazany fa tsy tokony hanantena be fahatany amin'io fiezahana hifampiraharaha io ny Kiorda.
Idrees Mohammd  mandrangaranga fa miha-mavesatra ny tsindry anatiny mahatonga an'i Erdogan hiresaka fifampiresahana bebe kokoa. Saingy nolazain'i Baxtiyar , izay mpianatra politika sy fifandraisana iraisampirenena, fa ny mahatonga ny fironana mankany amin'ny fifampiraharahana dia noho ny “fahalemen'ny tafika tiorka amin'ny fifanandrinany amin'ny mpiady anaty akatan'ny PKK”.
Tsy misy isalasalana fa vonona ny hifampiraharaha ny mpioko kiorda, satria maro ny olony no maty vokatry ny fandarohana baomba ny tendrombohitra misy ny ankamaroan'izy ireo. Misioka i Hevallo , mpanohana ny Kiorda fa miantso ny “hanaovana indray ny fifampiresahana tany Oslo” ny mpioko Kiorda.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/10/02/38564/
 niteny tao amin'ny Euronews: http://www.euronews.com/2012/09/27/how-much-more-will-violence-escalate-in-turkey-/
 tatitra nilaza: http://www.hurriyetdailynews.com/pkk-wants-to-restart-negotiations-report.aspx?pageID=238&nid=30904&NewsCatID=338&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter